कुकुर तिहार | Hamro Patro
रात्रिको ०८ : ४३
कुकुर तिहार विशेष अडियो सामाग्री
कागलाई त खुवाइयो अनि पूजा गरियो नि हैन ? यसपालाको यमपञ्चकको दोश्रो दिन अर्थात कुकुर तिहार दैलोमा आइपुग्यो है । काग एउटा पंक्षी भएकाले यसलाई भेट्न या छुन त अफठेरो छ, परैबाट खाना राखिदिएर अनि उक्ति निकालेर कागलाई मालासम्म पहिर्याउने चलन छ । हिजो कागको दिन थियो भने आज मानव सभ्यताको प्रारम्भदेखि मानवजातिको प्रिय साथीको रूपमा रहँदै अाएको कुकुरको दिन । यस दिन थरिथरिका माला लगाएर कुकुरहरु बाटाघाटामा ठाँठिएका देख्न सकिन्छ, के छ त तयारी आजको दिनको ?
सनातन धर्ममा कुकुरको विशेष महत्व छ । कुकर मानव सभ्यता देखिनै मानवसंग अत्यन्त नजिक रहेको एउटा बफादार जनावरको रूपमा लिइन्छ । ऋगवेदमा प्रष्टसंग 'समरा'को बारेमा उल्लेख गरिएको छ । 'समरा' अर्थात् कुकुरहरुकी आमाले स्वर्गका राजा ईन्द्रलाई उनको हराएको वस्तु भेटाउन सहयोग गरेको प्रसङ्ग उल्लेख छ । हिन्दु परम्परा अनुरुप कुकुरलाई अभिभावक, सुरक्षाकर्मी अनि यमराजको दुत मान्ने गरिन्छ र मृत्यूपर्यन्त पनि मोक्षको द्वारमा कुकुरले नै पहरा दिएको कथन छ । महाभारतमा पनि सत्यवादी यूधिष्ठिरले आफ्नो भक्त कुकुर विना स्वर्गमा जान नमानेको कुरा उल्लेख छ । कुकुरलाई धर्मको अवधारणागत उदाहरण र सत्य मार्गको प्रतिनिधीकारुपमा पनि लिइन्छ । तन्त्रसाधक, निडर, अति शक्तिशाली भगवान भैरवको वाहन पनि कुकुर नै हो । चाणक्य नीतिमा पनि कुकुरलाई पातलो निन्द्राभएको बफादार अनि चनाखो साथै थोरै खाएर भएपनि सन्तुष्ट हुनसक्ने प्राणिकारुपमा ब्याख्या गरिएको छ । यि त भए शास्त्रका कुरा तर आधुनिक यूगको इतिहासमा पनि सर्वप्रथम पृथ्वीको कक्षबाहिर परिक्रमागर्दै अन्तरिक्षमा सन् १९५७ मा 'लाइका' नामक कुकर पुगेको हो । त्यसैगरि सन् १९२३ मा जापानको ओडाटेमा जन्मिएको 'हाछिको' नामक कुकुर र उसको मालिकप्रतिको बफादारीताको दृष्टान्त स्वरुप बनाइएको चलचित्र 'हाछिको' आजपनि विश्वभरि लोकप्रिय छ र उक्त चलचित्र हेरेर धेरै आँखा रसाएका छन् ।